कामको खोजीमा चाँगा बजाउन गएका १४ नेपाली सीमापारि नै रहे
खाँदबारी । चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि चीनले किमाथाङ्का नाका बन्द गरेको छ । सङ्खुवासभाको उत्तरी क्षेत्र किमाथाङ्मा नाका बन्द भएपछि कामको खोजीमा चाँगा बजार गएका १४ नेपाली सीमापारि नै रहेको भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले जानकारी दिनुभयो । सीमापारि...
गोठमा आगलागी हुँदा ४५ वर्षीया महिलाको निधन
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीनवटा गैँडा मरे
लोकसंवाद संवाददाता, माघ १९, २०७६
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कालगतिले मरेका १४ गैँडामध्ये तीनगैँडा विषाक्त खानाका कारण मरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा विजय श्रेष्ठका अनुसार गत हप्ता तमासपुर क्षेत्रमा एउटा गैँडा र एक महिनाअघि गाँजीपुर क्षेत्रमा अर्को एक...
लागूऔषध सहित गुरुङ पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका१५ भुईखेलबाट नियन्त्रित लागूऔषध डाइजेपाम ६ एम्पुल, फेनारगन३९ एम्पुल, नोर्फिन २ एम्पुल, नगद १ हजार ५ सय रुपैयाँ र ४ थान मोबाइलसहित सोही स्थानमा डेरा गरी बस्ने लम्जुङ घर भएका ३५ वर्षीय ओम बहादुर गुरुङ लगायत ४...
४ बुक तास सहित ९ जना जुवाडे पक्राउ
कास्की । पोखरा महानगरपालिका९ दरवार थोकस्थित ज्ञानहरि आचार्यको मासु पसलमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिका५ घर भई पोखरा महानगरपालिका८ सृजना चोक बस्ने ३३ वर्षीय कमल गिरी लगायत ९ जनालाई नगद ४८ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ र ४ बुक...
सर्लाही दुर्घटनामा तीनको मृत्यु
सर्लाही । सर्लाहीमा भएको छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु र एक घाइते भएका छन् । बरहथवा नगरपालिकाको हिरापुरबाट सदरमुकाम मलङ्गवातर्फ आउँदै गरेको बिआर३०एच ६७९८ नंको मोटरसाइकललाई गोडैता नगरपालिका७ मोहनचोकस्थित नम्बर नखुलेको सवारी साधनले ठक्कर दिँदा मलङ्गवा२ निवासी २० वर्षीय...
शर्मिला खड्का, माघ १७, २०७६
कुरा केही हप्ता अगाडिको हो । काम विशेषले शहरदेखि गाउँको घरसम्म गएकी थिएँ । शहरमा रहेकाले एउटा सुन्दर सामान पठाएका रहेछन् । आहा ! कति आकर्षक देखिन्थ्यो । सबै छरछिमेकी जम्मा भई ओल्टाइपल्टाई गरेर हेरियो । खोलेर हेर्दा थाहा भयो,...
लोकसंवाद संवाददाता, माघ १७, २०७६
भद्रपुर । नेपाल प्रहरीले वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन देखाई भारततर्फ लैजाँदै गरिएका दुई युवतीलाई पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट उद्धार गरेको छ । साथै मानव बेचबिखनको अभियोगमा एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका४ घर भएका २१ वर्षीय सुदीपबाबु...
१२औँ जनगणनाको तयारी पर्वतमा पनि शुरु
पर्वत । सरकारले हरेक १०/१० वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणना फेरि शुरु हुँदैछ । विसं २०७८ मा गरिने १२औँ जनगणनाको तयारी पर्वतमा पनि शुरु भएको छ । कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्यले मेरो गणना, मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ...
कर्णाली एक्स्पोमा सेल्फी जोन निर्माण गरिने
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वीरेन्द्रनगरमा अर्गानिक कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार तथा सांस्कृतिक महोत्सव२०७६ आयोजना हुने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालय र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य...
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा नगद सहित पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं, गोकर्णेश्वर नगरपालिका५ जोरपाटीस्थित छिरिङ शेर्पाको जस्ताको टहरामा तास खेलिरहेका तिब्बत घर भई हाल बौद्ध बस्ने ३७ वर्षीय नवाङ कुन्साङ समेत १० जनालाई नगद २ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र ६ बुक तास सहित सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ...
तीनवटा ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु
रुपन्देही । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा आज तीन वटा ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई गम्भीर घाइते भएका छन् । भैरहवा परासी सडकखण्डमा पर्ने रोहिणी गाउँपालिका४ सिपागढमा भैरहवादेखि परासीतर्फ जाँदै गरेको लु १ ख ६७४५ नम्बरको ट्रक...
लोकसंवाद संवाददाता, माघ १३, २०७६
सर्लाही । हरिपुर नगरपालिका१ जानकीनगरस्थित सडकमा ना.१ क ७०४८ नम्बरको बसले आइतबार दिउँसो ठक्कर दिँदा सोही ठाउँ बस्ने सुरेन्द्र साहको २ वर्षीया छोरी दिपाञ्जली कुमारी साहको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लिई यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप...
लाहानबाट चाँदीका गहना सहित २ जना पक्राउ
लोकसंवाद संवाददाता, माघ १२, २०७६
सिरहा । लाहान नगरपालिका८ बाट अबैध रुपमा बोकेर हिँडेको ५ किलो ७ सय ४२ ग्राम ७५० मिलीग्राम बराबरको चाँदीका विभिन्न गहना सहित २ जनालाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका१४ बस्ने ३० वर्षीय...
३१ थान नेपाली नक्कली नोट सहित २ जना पक्राउ
लोकसंवाद संवाददाता, माघ ५, २०७६
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका१४ कलंकी चोकबाट १ हजार दरको ३१ थान नेपाली नक्कली नोट सहित २ जनालाई आइतबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा बारा निजगढ घर भएका २७ वर्षीय अनुस थापा मगर र सोही ठाउँ बस्ने २२...
खसीमा पनि भन्सार छली !
कपिलवस्तु । बिजयनगर गाउँपालिका५ नौरङ्गियाबाट अबैध रुपमा भन्सार छली ल्याउँदै गरेको करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ५४ वटा खसी शनिबार साँझ प्रहरीले बरामद गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरबाट खटिएको प्रहरीलाई देखेर ल्याउँदै गरेको उक्त खसीहरू छोडी...
काठमाडौं । देशका पश्चिम र मध्ये भागमा वर्षा र हिमपात भएपछि आज देशभर पुनः चिसो बढेको छ । पश्चिमी न्यून चापीय वायुको असरका कारण देशका पश्चिम र मध्यका अधिकांश स्थानमा हिमपात तथा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम...
बनेपा । बनेपा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाको टोलीले बनेपा नगरपालिका९ मगरगाउँमाथिको जङ्गलमा तास खेलिरहेको अवस्थामा नगद र सवारी साधनसहित पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जङ्गलमा गएर लुकेर तास खेलिरहेको अवस्थामा बुधबार बेलुका पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै नगद एक...
सप्तरी । बलान बिहुल गाउँपालिका४ स्थित सडकमा भन्सार छली ल्याउँदै गरेको लेडिज कुर्ता र साडी लगायतका करिब १ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान सहित २ जनालाई बुधबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा खडक नगरपालिका७ बस्ने २३ वर्षीय उपेन्द्र...